China 3321R Yakakura Fomati YC3321R UV Mbeu dzakauchikwa Printer Kupurinda Kupurinda Muchina Vagadziri nevatengesi | Ntek
3321R Yakakura Fomati YC3321R UV Yemahara Printer Dhinda kuRongedza Kudhinda Muchina
ChiJapanese chakatumirwa kunze kwenyika Ricoh GEN5 musoro wekugadzirwa kwemaindasitiri.
CMYK W LC LM uye varnish sarudzo ye glossy pamusoro uye yepamusoro mhando kudhinda.
Yakaomeswa anodized yekuzadza chikuva kuti udzivise kukuvadza chikuva nezvinhu zvakaomarara.
Auto kukwirira kuona tekinoroji kuti uone kudhinda midhiya ukobvu otomatiki.
Otomatiki anti-static dhizaini yekudzivirira guruva inki inodonhedza ichibhururuka.
Yepamberi yekudhinda yemusoro anti-kuputsika system kudzivirira njodzi yekurovera pakati pechinyorwa chekudhinda nezvinhu.
Ntek YC3321R UV yemasanganiswa purinda ndeimwe yakanyanya kunyatsoita uye inomhanyisa yekudhinda maindasitiri, ine Ultra yakafara yekudhinda fomati inosvika ku3.3m, iyo inonziwo UV flatbed uye roll kumonera purinda, inoenderana ne UV flatbed printer, inowedzera basa rekudhinda roll zvinhu kumberi, ziva one muchina une zvinangwa zviviri kune ese maviri flatbed zvinhu uye roll zvigadzirwa kudhinda.
Our UV chemasanganiswa aidhinda vanotora yepakutanga Japanese kupinza maindasitiri giredhi grey-chiyero Ricoh G5 / G6 simbi isina tsvina mukati kupisa musoro ne kuita kwepamusoro mukumhanyisa uye kugadzirisa, sutukukwanisa yekushanda kwenguva yakareba, maawa makumi maviri nemaviri achimhanya. Inodonhedza ingi yaRicoh Gen5 musoro ndeye 7-35pl, Ricoh Gen6 musoro ndeye 5-15pl, ine yakakwira yekudhinda resolution uye nekukurumidza kudhinda kumhanya.
NaRicoh Gen6 musoro, iyo printa inoshongedza yakakwira kugadzirisa ye liner mota nesimbi encoder strip, saka kudhinda kumhanya kweRicoh Gen6 musoro kuchakurumidza 40% kupfuura Ricoh Gen5 misoro. Iine 8 kudhinda kwemavaraCMYK W LC LM uye varnish sarudzo ye glossy pamusoro uye yepamusoro kudhinda. Kudhindisa kunogona kuve nemisoro ye2-16, yakakwira yekumhanyisa kudhinda inosvika ku80sqm / h kuti uone kugadzirwa kwemaindasitiri.
Our UV chemasanganiswa purinda adopt yepamusoro yerabha chinotenderera kupurinda panguva imwe chete, iyo inovimbisa izvo zvinhu zvisina kuunyana uye kure-track. Uye iyo inodhinda ine anti-kudhumhana system, otomatiki kukwirira kuona mudziyo, hard aakagutsurira musoro vacuuming platform, anti-static basa uye pini yekunyoresa ndeyokusarudza. Printa yedu ine industry giredhi rinorema basa chimiro chengetedza iyo kunyatsoita uye kugadzikana panguva yekudhinda.
Yedu UV yakasanganiswa purinda inogona kwakawanda kudhinda pa Dhinda pagirazi, zvedongo tile, PVC, aluminium sheet, huni MDF bhodhi, simbi pani, bhiribhodhi, acrylic pani, pepa bhodhi, furo bhodhi, chemarata makadhibhokisi, dehwe, banner flex, kanivhasi, mesh pepa, chinamirwa, madzirobepa, nezvimwe. Uye yakashandiswa mukushongedza indasitiri, girazi indasitiri, kushambadzira & zviratidzo indasitiri, dehwe, fanicha uye zvedongo indasitiri etc.
Pashure: 3321L uv hukuru hukuru 7 mavara anonhuwira mabhodhoro purinda flatbed uv foam bhodhi yakafara fomati simbi kadhi kudhinda
Kudhinda Muchina Kutenderera Kumonera
Kudhinda Ku Tambanudza Dhijitari Kudhinda Muchina
Kudhinda Kuisa Yeindasitiri Kudhinda Muchina
Kutenderera Kuti Tambanudze Kudhinda Muchina
Uv Kutenderera Kudhinda Muchina Wekudhinda
6090 NTEK Flat Bed Phone Cover Printer Kudhinda ...
3321L UV hombe saizi 7 mavara pefiyumu mabhodhoro prin ...